Muuqaalka Abaaraha: Astaamaha iyo Muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 09/06/2021 18:00 | Abaaraha
Isbadalka cimilada wuxuu sababayaa dhibaatooyin culus oo caalami ah oo aan wajahayno qarnigan. Mid ka mid ah dhibaatooyinkaas ayaa ah soo noqnoqoshada iyo xoojinta dhacdooyinka cimilada daran. Dhacdooyinkaas ba'an waxaa ka mid ah abaar. Si loola socdo abaaraha ka jira dalkeena, a daawade abaaraha.
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato abaaraha daawadayaasha iyo faa idooyinka ay bixiso.
1 Saamaynta xun ee abaarta
2 Noocyada abaarta
3 Daawade Abaaraha
4 Ahmiyada daawada abaaraha
Saamaynta xun ee abaarta
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan ogaano waa qeexitaanka abaaraha. Abaarta aag waxaa lagu gartaa inay yeelato waqti dheer kuwaas oo roobkoodu ka hooseeyo celceliska. Maanta waxaa jira abaaro leh xoog iyo waqti ka badan kuwii hore. Kordhinta soo noqnoqoshada iyo xoojinta dhacdadan waxay muujineysaa saameynta taban ee isbeddelka cimilada uu ku leeyahay isbadalka jawiga.
Haddii aan ku darno dhibaatadan masiibada dabiiciga ah ee ay keento, waxay tusineysaa isku dheelitir la'aanta biyaha iyo saadka biyaha oo bilaabaya inay soo bandhigaan heerar ka hooseeya caadiga. Waxaas oo dhami waxay kicinayaan raadad taban oo ka sii halista badan kuwa ay geystaan ​​duufaano xoog badani ilaa way ka sii adag tahay in la qeexo oo la odoroso. Waa in maskaxda lagu hayaa in bini aadamku leeyahay qalab uu ku saadaalin karo roobab mahiigaan ah. Si kastaba ha noqotee, abaaraha ayaa aad u adag in la xakameeyo.
Si tan loo sameeyo, shaqo ayaa la qabtay si loo helo daawade abaaraha. Hawsha lagu qiimeynayo darnaanta iyo cawaaqibka abaarta marka loo eego ujeedada ayaa ah mid inta badan ka dhib badan tan iyo markii abaaraha noocan oo kale ah ay si tartiib tartiib ah oo kala duwan ugu soo baxaan gobol kasta oo aan baranayno. Badanaa waxaa soo saarta badanaa roob la'aanta daba dheeraatay ee ka jirta gobol. Waxaas oo dhami waxay keenayaan isku dheelitir la’aan xagga biyaha ah.
Dhacdadan saadaasha hawada ee xad dhaafka ah waxaa loo kala saaraa iyadoo loo eegayo cabbirka heerkulka, uumi baxa, roobka, qulqulka, qulqulka iyo xogta laga soo ururiyey qoyaanka ciidda ee meel cayiman. Haddii aan dooneyno inaan tirakoobno ​​abaaraha, waxaan adeegsanaa tusmada roobab ee heerka caadiga ah ama heerka baaxadda abaarta. Iyada oo loo marayo indices-yadaas, dhammaan gobolka si xun u saameeyay waa lala socon karaa.
Aan aragno waa maxay noocyada abaaraha ee jira:
Saadaasha hawada: Noocaan, celceliska roobka ayaa ka hooseeya sidii caadiga ahayd, laakiin maahan inay jirto roob la'aan.
Beeraha: xaddiga qoyaanka ciidda ku jira ee daruuriga u ah dalagyada ayaa ka yar. Sidaa darteed, dalagyada ayaa saameeya.
Biyoloji: Waa mid dhacda marka biyaha ka yimaada dhulka dushiisa iyo dhulka hoostiisa ay ka hooseeyaan sida caadiga ah.
Dhaqaale-dhaqaale: waa mid saamayn ku leh hawlaha aadamaha.
Waxaa jira qaabab kale oo loo kala saaro noocyada kala duwan ee abaarta iyadoo loo eegayo goobta iyo xilliyada. Halkan waxaan ka helnaa waxyaabaha soo socda:
Ku meel gaar ah: waa midda laga helo cimilada saxaraha ee roobku ku badan yahay. Tusaale ahaan, waxaan leenahay lama degaanno ay roobab la'aantu caadi ka tahay.
Xilliyeed: dhacdaa kahor xilli gaar ah oo xilliyeed.
Lama saadaalin karo: Waxay u muuqataa inay leedahay caadooyin gaagaaban oo aan caadi ahayn. Aad bay u adag yihiin in la sii saadaaliyo duruufaha jira awgood.
Lama-arki karo: Waa mid ka mid ah kuwii ugu yaabka badnaa tan iyo, inkasta oo roobabku si caadi ah u da'een, haddana biyuhu si dhakhso leh ayey u baxaan.
Waan ognahay in abaaraha ay sababeen roobabkan isdaba jooga ah ee ka da'aya gobol. Hawada badiyaa way degtaa waxaana loo horseedaa aagagga cadaadiska sarreeya. Tani waxay yaraynaysaa qoyaanka waxayna sameysaa qadar yar daruuraha. Maaddaama ay jiraan daruuro tiro yar, roobabka ayaa yaraanaya. Maaddaama tirada dadka ay sii kordhayaan, baahida biyaha ayaa waliba si dabiici ah u kordheysa. Haddii aan intaas ku dareyno saameynta kuleylka adduunka, abaaraha ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo soo noqnoqda oo aad u daran.
Tan darteed, Golaha Sare ee Baarista Sayniska (CSIC), oo kaashanaysa Hay'adda Aragonese for Research (ARAID), iyo Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka (AEMET) ayaa soo saaray nidaam lagula socdo abaaraha waqtiga dhabta ah. Waxaa loo yaqaan magaca daawadayaasha abaarta ujeedkuna waa in la sameeyo kormeer joogto ah si awood loogu yeesho in si dhaqso leh loo saadaaliyo dhacdadan.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee waxyeellada u geysta beeraha, dhaqaalaha iyo bey'adda, saameynteeda ayaa muuqata ka dib muddo dheer oo ay roobabku ku yaraayeen. Way adag tahay in la qeexo waxa bilowgiisa, muddadiisa iyo dhammaadkiisu yihiin. Sidaa darteed, abuurista daawadayaasha abaaraha waxay bixin kartaa macluumaad waddanka oo dhan ah oo la cusbooneysiiyaa toddobaadle. Maxaa intaa ka badan, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad la tashato macluumaad taariikhi ah oo ku saabsan la'aanta heerka roobab ilaa 1961.
Nidaamku wuxuu awood u leeyahay inuu ka baaraandego dhammaan macluumaadka laga helo waqtiga dhabta ah shabakadda AEMET ee saldhigyada saadaasha hawada ee otomaatigga ah iyo shabakadda SIAR (Agroclimatic Information System for Waraabka) ee Wasaaradda Beeraha, Kalluumeysiga iyo Cuntada. Waad ku mahadsan tahay macluumaadkan, laba tilmaame ayaa la xisaabin karaa oo muujinaya jiritaanka dhacdadan aadka u daran. Xaqiiqdii tilmaamayaasha waxay ku saleysan yihiin si gaar ah xogta roobabka daadka. Waxay yihiin tilmaamayaal lagu daro macluumaadka ku saabsan baahida qoyaanka jawiga.
Ahmiyada daawada abaaraha
Muhiimadda bandhigan abaarta ayaa ah inay ku guuldareysato inay muujiso cilladaha labada indices ee la xiriira xaaladaha caadiga ah ee goob kasta oo ka mid ah dhulka. Dhammaan meelaha ay xaaladdu ku habboon tahay abaarta, kormeerku wuu gaari karaa soo saar macluumaadka oo muuji muddadiisa iyo xooggeeda. Waxay yihiin tilmaamayaal u oggolaanaya qiimeynta tiro badan oo xog ah si ay u muujiyaan saameynta suurtagalka ah ee ay ku yeelan karto dhacdadan saadaasha hawada ee ba'an Waxaas oo dhami waxay suurtogal ka dhigayaan in la hagaajiyo u diyaargarowga iyo digniinta hore ee halista ka jirta Spain.
Kuu ogolaanayaa inaad xulato macluumaadka khariidada adoo dooranaya tusmo muujineysa abaarta saadaasha hawada, jaangooyada waqtiga tusmada iyo taariikhda. Waxay kaloo oggoshahay xulashada aag gaar ah oo la arki karo si aad si fiican ugu baran karto.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan kaga baran karto daawadayaasha abaaraha iyo astaamaha ay leeyihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Daawade Abaaraha